16 Guurada Duqayntii Caan baxday ee Daarihii Mataanaha ahaa ee New York,Xarunta Gaadhaandhiga Maraykanka,Anfariirkii ruxay Quluubta Shacabka Maraykanka & Muuqaaladii Mahadhada Reebay!! DAAWO | Somalidiasporanews.com
16 Guurada Duqayntii Caan baxday ee Daarihii Mataanaha ahaa ee New York,Xarunta Gaadhaandhiga Maraykanka,Anfariirkii ruxay Quluubta Shacabka Maraykanka & Muuqaaladii Mahadhada Reebay!! DAAWO
New York 12. September 2017 (SDN/QJ):-Shalay Waxay ku beegan tahay 16-guuradii ka soo wareegtay Weerarkii loo adeegsaday Diyaaradaha Rakaabka ee la soo afduubtay ee bishii Sept. 11-dii ee sannadkii 2001-dii lagu burburiyey Daaraha Mataanaha ee Xarunta Hanacsiga Caalamiga (World Trade Center) oo ku yaalla magaalladda New York.
Hadaynu yara milicsano Dhacdada Septembert. 11, ee sannadkii 2001-kii waxaa la sheegay inay 19 Djallinyaro ka tirsan Ururka Alqaacida oo Tababar Duuliye Diyaarad lahaa si xoog leh ku qafaasheen 4 Diyaarado Rakaab oo ay u adeegsadeen Weerarkaas lagu hoobtay.
Warbixinta ayaa lagu muujiyey inay Safaaradda Sacuudiga kharaj ku bixisay 2 ka mid ah Shaqaalahooda oo wax ka fuliyey Afduubka Diyaaradaha loo adeegsaday qaraxyadii Daaraha Mataanaha ee magaalladda New York.
2-sanno ka hor inta uusan dhicin weerarkaasi, Safaaradda Sacuudiga waxay bixisay Kharajka 2 Muwaadin Sacuudiyaan ah, kuwaasi oo Maraykanka ugu noolaa iyagoo iska dhigayey Arday, balse ku lug ah fulinta mu’aamaradda Weerarkaasi.
Warbixin ay Hay’adad FBI diyaarisay ayaa waxaa ku sheegeen in 2-da Arday oo lagu kala magacaabo Maxamed Al-qudhaeein iyo Xamdaan Al-shalawi inay xaqiiq ahaan ahaayeen xubno ka tirsan Shabakada Sirdoonka ee Sacuudiga u jooga gudaha Maraykanka.
Qoraalka FBI-da waxaa kaloo lagu sheegay inay labadaasi qof ka shaqeeyeen sidii ay Dowladda Sacuudiga uga heli lahaayeen Lacagod, iyadoo Maxamed Al-Qudhaeein shaqaale ka ahaa Wasaaradda Arrimaha Islaamka Sacuudiga.
Sidoo kale, Xamdaan Al-shalawi waxa uu ahaa shaqaale muddo dheer u shaqeynayey Dowladda Sacuudiga.
Baarayaal badan ayaa ogaaday inay labadaasi nin u soo safreen Washington, si ay uga qeyb galaan seminar ay marti-gelisay Safaaradda Sacuudiga ee Washington oo kaashanaysa Machadka Islaamka iyo Sayniska Carabiga ee Maraykanka oo uu Danjiraha Sacuudiga madax ka ahaa.
Baarayaasha FBI-da waxay kaloo xaqiijiyeen inay Qudhaeein iyo Shalawi iibiyeen Tikidhaha Diyaaradaha ee kooxihii afduubtay Diyaaradihii loo adeegsaday Weerarkii Daaraha Mataanaha.
Baarayaashu waxay qoraalkooda ku xuseen inay Safaaradda Sacuudiga bixisay Kharajka 19-kii nin ee ka dambeeyey afduubkaasi.
Qoraalka waxaa kaloo lagu xusay inay FBI-da hayaan boqolaal kun oo bog ee Dukumentiyo Dowladeed oo Sacuudiga ku xiriirinaya inay si qarsoodi ahh u taageeraan Kooxaha loogu yeero Argagixisadda.
Warbixinta lagu soo daabacay Wargeyska New Yor Post waxaa lagu soo gebagebeeyey inuu Wregsyka ku guul-daraystay isku-dayay ku doonayeen inay Telefoon iyo E-mail ku helaan Qareenadda wakiilka u ah Dowladda Sacuudiga si ay wax uga weydiiyaan arrimahaasi.